Talo ku socota Midowga Musharrixiinta | KEYDMEDIA ONLINE
Saraakiisha iyo Ciidammada mileteriga iyo Booliska ka tirsan waxay qaateen go’aan lagu badbaadinayo midnimada, sharciga, iyo qarannimada Soomaaliya, hadafkaasoo aan weli si buuxda loo xaqiijin ilaa maanta. Ka noqoshada muddo kororsiga xaaraanta aheyd waxay hordhac u tahay dib u soo celinta ku dhaqanka dastuurka kmg iyo ilaalinta xorriyada iyo xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed. Madaxdii dhibaatada abuurtay ma aqoonsana ilaa maanta gefkooda.
Waxaa muhiim in Madaxda Midowga Musharrixiinta taageeraan, talada iyo go’aanka ku qaataan kacdoonka Ciidammada iyo Shacbiga, kana fogaadaan inay iska dhigaan dhexdeexaad iyo shaati cadayaal ku jira gorgortan darajo.
Xaalka Soomaaliya wuxuu maraya in dastuurka kmg iyo Qarannimada Soomaaliya lagu difaacay xoog hubeysan. Sidaa darted, iska hor imaadka socda ma ahan mid qabiil ama dagaal sokeeye, waa difaaca dowladnimada Soomaaliya ee saldhiggeedu yahay ilaalinta xuquuqda iyo xorriyada muwaadiniinta iyo dhawrista heshiiska doorashada muddeysan 4 sano kasta dib u dhac la’aan.